Panda Kung Fu lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Panda Kung Fu lalao
voly anareo Kung Fu Panda lalao an-tserasera. Hatramin'ny fotoana voalohany, rehefa manomboka milalao iray amin'ireo soso-kevitra ianao, dia ho tonga saina ny fomba fijery hafahafa toy ny mpilalao fototra, ary ny fomba finday izy, raha dia ilaina ny manao zavatra. Aoka hatao hoe nandritry ny ady, dia mampody ny latabatra, nanatona ny tongony, Nandondòna mpandalo, fa mitady sy ny fahombiazana. Izany dia mavitrika sy mahafinaritra kilalao, mamaly ny tsara. Misy ihany koa ny fikarohana ny zavatra eo amin'ny sary, ny roa ny karatra fahasamihafana. Raha tianao, dia afaka hanangona maro loko Puzzles na nandoko ny sehatra avy ny sariitatra, izay mainty sy fotsy.
Lalao Kung Fu Panda tamin'ny Category:
Ny tsara indrindra Panda Kung Fu lalao
Kung Fu Panda 3: The tezitra Ady
Kung Fu Panda: Call tompon-daka
Kung Fu Panda: Fanafihana ny Dragon
Kung Fu Panda: Mason'ny Tiger
Kung Fu Panda 2: Legend ny Wu Sisters
Kung Fu Kiss Panda
Kung Fu Panda 2: tigra Hanketo
Kung Fu Panda toko
Vonjeo ny Panda
Kung Fu Panda: Tantara By
Kung Fu fandokoana Panda
Panda tohina toko
Kung Fu Panda: Find fanarahan-dalàna
Atolotry ho Oscar
Izao tontolo izao ny Kung Fu Panda: afomanga KART
Kung Fu Panda 2: Ady poti
Kung Fu Dress Panda
Puzzle Kung Fu Panda sy ny ekipa
Kung Fu Panda: Dress Shifu
Panda sy Friends: fahasamihafana
Kung Fu Panda: Zavatra tsy ny tafo tanimanga
Kung Fu Panda: Zavatra tsy Stars
Maps Kung Fu Panda
Kung Fu Panda: Hitady Fifanarahana
Panda basy fivarotana
Winnie ny Kung Fu Pooh sy Panda
Kung Fu Panda taolana sy King
Kung Fu Panda 2 Spot ny fahasamihafana
Kung Fu Panda Hidden Taratasy
Kung Fu Pagda: Running rajako
Kung Fu Panda: Fahafatesana Match
Kung Fu Panda - Resy ny Dragon
Kung Fu Panda fiaran-dalamby fitadidiana
Kung Fu Panda Miafina zavatra
Kung Fu Panda Challenge Foko
Kung Fu Panda 3: Po Ny Mason'ny Adventure
Kung Fu Panda: toerana amin'ny taratasy
Araka an'i Tai Lung Ady Totohondry
Kung Fu Panda: Hoops fahaverezan-tsaina
Kung Fu Panda 2: fandokoana Pejy
Kung Fu Panda 2: Sort ny taila
Kung Fu Panda: Po ny Awesome fahazotoan-komana
Farany Panda Kung Fu lalao
Kung Fu Panda 3 - Miafina Panda
New Adventures dia miandry anao ny fidget pandà
Lalao Online Rehetra Panda Kung Fu lalao
Mahavariana ny tantarany
Ary rehefa niorina ny fiainana sy ny tsy fampindramam ny Rot, dia toa toy ny dia haharitra mandrakizay, ary indraindray dia lasa mankaleo. Fa misy foana ny toerana ny fahagagana sy tampoka tampoka rehefa misy toe-javatra tsy mahazatra ny fomba fiaina nentim-paharazana. Plump sy milamina Mishutka Amin'ny alalan'ny fivarotana paty ary dia tena faly ny be, fa indray mandeha dia nitranga fa tao an ny sekoly ny kung-fu, ka nahasarika ny sain'ny mpampianatra ny haiady. Inona marina nahasarika ny tompony, tantara dia mangina, fa satria izy no tompony ary ny unpretentious Raha vao jerena toa ny mahita ny tena mahery fo.
Rehefa afaka ny fifidianana ary nandray ny anaram-boninahitra ny Dragon Mpiady, Tahaka ny avy tampoka mpivarotra tsotra mivadika ho amin'ny ady milina izay hanorotoro ny zava-drehetra. Ny zava-misy fa korontam fanaka sy ked tongotry ny olon-kafa, dia tsy nentina ho tantara, dia afaka foana milaza fa izany no olona iray, dia karazana milina. Ary indray mandeha Mishutka variana amin'ny mahazatra hevitra, satria nanana fahatsapana ny fiainana sy ny iraka manan-danja. Fanatanjahan-tena tsy tapaka mora tezitra ny toetrany sy atao mafy. Izany no izy satria lasa be herim-po bumpkin mahery fo, na dia ny safidinao. Mbola tia hihinana, ary izany dia manana fiantraikany ratsy eo amin'ny efa be lanja.
Ampio ny toerana tena mahery fo, milalao lalao Kung Fu Panda
Mba handray azy somary matavy, misokatra Kung Fu lalao Panda sy manao By fiaran-dalamby. Azonao atao mihitsy aza mampiseho ny fahaiza-manao amin'ny mannequin, nefa aza mieritreritra fa fanatanjahan-tena ho fitaovana hanamora ny asa. Izy dia afaka miady indray ary tsy maintsy ho tena nahira-tsaina ny tratran'ny valifaty ary nataony ihany.
dia mba hihazonana ny olo-malaza ianao aterina amin'ny pandà manova hoop, na milalao baskety. Mahagaga, ny fahaizany mamikitra izay mitaingina ny atleta fluffy ity! Ary rehefa mahatsapa vonona ho fitsapana lehibe kokoa, handeha hamonjy ny mponina amin'ny tany lemaka Fiadanana, ary Mr Pina. Rehefa avy nandinika maro mahomby teknika, resy ny tafika ny mpanafika, ary ny famoahana ny mpandray anjara rehetra. Raha hiatrika ity sarotra, tsy nitendry lalao hevitra fotsiny, ary hatanjaho ny anaram-boninahitra avo ny Dragon Mpiady.
Nandritra ny lalao an-tserasera Kung Fu Panda no hahatanteraka asa mampidi-doza indrindra. Indray mandeha aho, taitra tamin'ny taonjato maro ny torimaso mahatsiravina dragona. Indray mandeha dia voahidy tao an-tranomaizina, ary nametraka ny tsipelina, fa izy afaka hanafaka ny tenany ary ankehitriny te hamaly faty. Fa izany dia mila ny baolina kristaly miafina ao amin'ny tempoly fahiny, ary haingana dia haingana hankany. Ny pandà ihany no afaka hanakana ny ratsy ary hisoroka loza. Fa mba hahazoana hery fanampiny, tsy maintsy manangona ny tafiditra Mishutka fanahy ny mpiady izay efa voaisy tombo-kase indray mandeha ny dragona ao an-trano-maizina. Niala fanafihana sy ny fampijalian ny fanafihana ao amin'ny fanafihana, nanampy manodidina ny dragona sy handresy izao tontolo izao hiverina any an-tranony tany.
Fa ny gameplay ny Kung Fu Panda 2 mamerina ny tapany faharoa tany io kosa Eleazara ny nafana horonantsary momba izany clubfoot. Nandritra ny fotoana izao tontolo izao nanomboka hanjavona tompony ny kung-fu, mba hitombo fahaizana amin'ny sekoly samihafa sy ny tari-dalana. Mpampianatra pandà Nianatra ny vaovao ary nahita fa ny tsiny rehetra ny mpanao jadona, dia nanapa-kevitra ny hanorina ny fahefany manerana izao tontolo izao. To tsy nisy nanelingelina azy, dia nanapa-kevitra ny handringana ny haiady rehetra sekoly, ny mpianatra sy ny mpampianatra. Fa tsy mandinika ny tena – By tsy resin'ny fahoriana, na tsy nety ny tsara indrindra ho mpianatra. Ary Jesosy niantso ny fampielezan-kevitra ny namana tsara indrindra, Panda mandeha amin'ny traikefa nahafinaritra iray mampidi-doza, mba hiady amin'ny tafiky ny fahavalo. Ho tsy mampino fampisehoana, nasiana zavamanitra mampahatsiro azy ny haiady, ny fampiasana ny paikady sy ny tetika. Ary ny handrava ny manaraka hitter, aza adino ny mifandimby fiarovana sy ny andian-punches.